War saxaafadeed: Puntland oo fasaxday in hawada ay ku noqoto Laanta af-Soomaaliga ee VOA. – Radio Daljir
War saxaafadeed: Puntland oo fasaxday in hawada ay ku noqoto Laanta af-Soomaaliga ee VOA.
Garowe, Oct 09 – Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Puntland ee Soomaliya ayaa fasaxday Laanta af-Soomaliga ee VOA maanta, 9 Oktoobar 2009. Go’aankaan waxaa la gaaray kadib markii wadahadalo dhexmareen Dowladda Puntland iyo sarakiil ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Dowladda Maraykanka, oo uu ka mid yahay Mas’uulka Xafiiska Siyaasadda Soomaaliya ee Safaarada Maraykanku ku leedahay dalka Kenya iyo Madaxa VOA ee fadhiya Washington, D.C.
Madaxweynaha Dowladda Puntland ayaa ogolaaday in Laanta af-Soomaliga ee VOA ay dib u bilawdo baahinta wararka maanta iyadoo uu tixgalin gaar ah siiyay Safiirka Maraykanka u fadhiya Kenya Md. Michael E. Renneberger oo ka qeybgali doono Shirka Golaha Qurba-joogta Puntland (Puntland Diaspora Forum Conference) oo lagu qaban doono Gobolka Minnesota ee Dalka Maraykanka, 10 – 12 Oktoobar 2009.
Idaacadaha FM-yadda ka shaqeeya Puntland oo baahiya Laanta af-Soomaliga ee VOA ayaa lagu amray inay joojiyaan baahinta 1dii Oktoobar 2009, kadib markii dad ka shaqeeya Xarunta Laanta af-Soomaliga ee VOA ee Magaalada Washington ay ku guuldaraysteen baahinta warbixino xaqiiq ah la xiriira arrimaha Puntland.
Dhowaan ayay ahayd markii Laanta af-Soomaliga ee VOA waraysatay ruux aan lagu kalsoonaan karin isagoo ka been sheegay in caasumadda Puntland ee Magaalada Garoowe laga furay xafiis ka wakiil ah koox-diineed hubaysan. Ninkaas ayaa iminka ku xiran xabsi ku yaala Puntland isagoo sugaya in la soo hortaago Maxkamad sharci ah. Dowladda Puntland waxay u aragtaa waraysiyadda noocaan oo kale ah in looga dan leeyahay sidii loo abuuri lahaa xasilooni darro iyadoo la baahinayo warar aan sal iyo raad toona lahayn.
Dowladda Puntland waxay ku adkaysanaysaa sugidda sharciga iyo kala-danbaynta degaanadeeda, waxayna damaanad qaad ka haysataa Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Maraykanka taasoo la xiriirta in wax laga qabto qaabka shaqo ee Laanta af-Soomaliga ee VOA.
Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta
Dowladda Puntland ee Soomaliya
9 Oktoobar 2009